ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (အငြိမ်းစား)၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်နှင့် အပေါင်းအပါ ၅၀ ကျော်ကို တရားစွဲဆိုသွားမည်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (အငြိမ်းစား)၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်နှင့် အပေါင်းအပါ ၅၀ ကျော်ကို တရားစွဲဆိုသွားမည်
အိမ့်သံစဉ် (ဧရာဝတီဘလော့)၊ ၇-၂-၂၀၁၃
မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း” (၁၉၀၃-၁၉၆၂) စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သည့် ကိုအောင်ထွန်းက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ (အငြိမ်းစား)၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်နှင့် အပေါင်းအပါ ၅၀ ကျော်ကို ICC/ ICJ ကမ္ဘာ့ ၁၉၉ နိုင်ငံမှ တရားသူကြီးချုပ်အားလုံးသို့ ပေးပို့ကာ တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကိုအောင်ထွန်းဟာ ရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ “လမျက်ခြယ်နှင့် နှင်းရိပ်လွန်ည” ဆိုတဲ့ ၀တ္တုစာအုပ် ထုတ်ဝေမှု မိတ်ဆက်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ တော်ဝင်နှင်းဆီခန်းမမှာ ဒီကနေ့ ကျင်းပစဉ်မှာ အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုအောင်ထွန်းဟာ အဆိုပါ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း ရေးသားပြုစုမှုနဲ့ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး မကြာသေးခင်က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 9:35 PM
ဒါဟာအမှန်တကယ်ကိုဖြစ်သင့်ပါတယ်မကောင်းတာလူပ်တဲ့သူဟာမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပြန်လည်ခံစားစေချင်။သူတို့ကျုးလွန်ထားတာက ဝက်သတ် နွားသတ် ပြီးကျုးလွန်ထားတာမဟုတ်ဘူး တိူင်းသူပြည်သားတွေကိုမတရားသတ်ဖြတ်ထားတာပါ။အားပေးပါတယ်လုပ်ကြပါ။
ဒါက ဖြစ်သင့်တာပေါ့ ဒီကောင်တွေကြောင့် ဘ၀ ပျက်သွားတဲ့သူတွေ အများကြီး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေလဲ အများကြီး ရှိတယ်
ဒီလိုမှပေါ့ဗျာ ဘာကိုမှမစဉ်းစားနဲ့လုပ်စရာရှိတာဆက်
I agree and I support you. Carry on.
Pls don't talk joking words. You find others way to get popular ok.
Possible in ICC / ICJ but local present constitution are fully covered on this .
ဘယ်တော့စွဲမှာလဲ အခုစွဲမှာလား တော်ကြာစွဲမလား စွဲချင်မှစွဲတော့မှာလား။သူတို့သေမှစွဲမှာလား။ နေဝင်းတို့ ဦးနုတို့ သခင်သန်းထွန်းတို့ကောပါလား။ AB က လူသတ်ကောင်တွေကောပါသေးလား။ လုပ်မယ်ဆိုစောင့်ကြည့်နေမယ်။ခုချိန်ကစပြီး ဘယ်နှစ်နှစ် ထိထပ်စောင့်ရမလဲ။၁၀ နှစ်လောက်တော့အချိန်ယူရမယ်ထင်တယ်။ဒါဆိုသူတို့တွေလည်းသူငယ်ပြန်လောက်ပြီ။ စာအုပ်ရောင်းကောင်းအောင်မဖွနဲ့ကွာ။
ဒီလူတွေက ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တော့ ကြောက်ကျတယ်။ သူတို့ အာဏရှိစဉ်က အခါတော်ပေးတွေ ပြောသမျှ အရာအားလုံး မှန်သည်-မှားသည် ဘာမှ မစဉ်းစားဘဲ တိုင်းပြည်လူထုဆန္ဒမျက်ကွယ်ပြုပြီးထင်ရာလုပ်ခဲ့တယ်။ နီကြန်ကြန့် ဆင်ကို ဆင်ဖြူတော်ဆိုပြီး-ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာတော်တွေ သုံးခဲ့ ဖြုန်းခဲ့တယ်။ ဘ၀ရှင် လဒ မင်းတရားကြီးက အမျိုးသားစီမံကိန်းတရပ်အနေနဲ့အနှစ်မရှိတဲ့ကြက်ဆူပင်တွေကိုပြည်သူလူထုကို အချိန်ကုန်ခံ ငွေကုန်ခံပြီး စိုက်ခိုင်းတယ်။ ဒါကြောင့် တရားစွဲသင့်တယ်-သတင်းစာ သမားတွေက ဖေါ်လံဖါး ရေးကြတယ်-ဒါကြောင့် သတင်းစာ သမားတွေပါ တရားခံထဲပါသင့်တယ်။ ဘယ်သူတွေ ရွှေပြည်အေး တရားဟောဟော နားမယောင်းပါနဲ့ -ဆက်လုပ်ပါ-အားပေးပါတယ်။
Taw Thu Ma said...
Please Be careful Ko Aung Htun and we need some one to look after for Ko Aung Htun. I still don't trust Burmese Government.
လောကကြီးမှာ ပြီးခဲ့တာတွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီး... ဆူဆူပူပူဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ မကောင်းပါဘူး... ဘယ်တုန်းကမှ ဒေါ်ခင်ကြည်ကို ဘယ်သူ့မှ သတိ မရခဲ့ပါဘူး ၁၉၄၇ ကတည်းကဒ်ါခင်ကြည်ကို မေ့ထားခဲ့တာ... နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ၁၉၈၈ခုနှစ် ကြမှ သက်သက် အသုံးချသွားတာပါ.. ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်တစ်မိသားစုလုံးကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက အသုံးချနေတာ ကြာနေပါပြီ.. တော်သင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်..
ပြီးခဲ့တာတွေကို ထားခဲ့ပြီး ရှေ့လျှောက်ရမယ့် လမ်းကို ဂရုတစိုက် သွားဖို့ကို စဉ်းစားသင့်ပြီ...
အခုလည်း လာပြန်ပြီ... လူ့အခွင့်အရေးတဲ့... ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတာ.. ပြောင်းလဲမှုတွေ လဲလုပ်သင့်သလောက်လုပ်နေကြပြီ.. ဒါကို နောက်ကြောင်း ပြန်ဆွဲပြီး.. ဦးသန်းရွှေ အပါအ၀င် ဗိုလ်ချုပ်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်က ကိစ္စတွေအတွက် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ တရားစွဲခြင်နေကြပြီ... ဘ၀မှာ မှားခဲ့ကြတာကတော့ လူတိုင်း နီးပါးပါဘဲ...
အမှားကင်းတဲ့လူဆိုတာရှားပါတယ်... အမှားကိုသိလို့ အမှန်ပြင်လိုက်ပြီဆို ခွင့်လွှတ်သင့်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်... ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်အသက်.ကိုယ့်မိသားစုအသက်ကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ဘာမဆို လုပ်မိမှာဘဲ... ဒါကို အပြစ်မဆိုသာပါဘူး... အမှန်တရားကို တကယ်သိလို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီဘဲ... ခွင့်လွှတ်စိတ်ကလေးတွေနဲ့ ကြည့်ပေးကြပါလို့... အဓိက က. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သား သမီး တွေ
ကောင်းစားဖို့ဘဲ မဟုတ်လား.. သူတို့ရဲ့ဘ၀ကို ကျွန်တော်တို့လို မဖြတ်သန်းစေခြင်ဘူး... ကဒါဖီလိုတော့ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး.... ကျွန်တော်တို့က ဗုဒဘာသာဝင်တွေဘဲ မဟုတ်လား... ကံ ကံ ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်ကြပါ... မည်သူမျှ လက်တုံ့ပြန်စရာ မလိုပါဘူး... ကံစီမံရာပေါ့.. ပျော့ညံ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး.... ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြီကြီး ကောင်းဖို့ တစ်ခု အတွက်ပဲ... ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေကို မကြုံဘူးတဲ့
တိုင်းပြည်ဆိုတာ မရှိပါဘူး... ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာ ခဲ့တာပါ.. အခုရေတွင်းတူး အခုရေကြည်သောက်လို့ မရပါဘူး...အချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်... အမြဲတမ်း မိုးမချုပ်သလို အမြဲတမ်းလည်း မိုးမလင်းပါဘူး...
ဒါကြောင့် အချိန်ကို စောင့်ဖို့လိုပါတယ်... ဦးမောင်မောင်လိုပြောရရင် ဆန္ဒမစောကြပါနဲ့..... အန်တီစုလည်း သဘောပေါက်သွားပါပြီ.. What she have to do..... ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာ အချိုန်ယူရပါတယ်... ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်.. ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မယ့် တိုင်းတပါးနေ(နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်ရနေသူများ) အတွက်ကတော့အခြေအနေ သိပ်မကောင်းတော့ပါဘူး.. ဒါ့အတွက်ကြောင့်ဘဲ ဒီလိုတွေ
အော်နေကြတာပါ.. ဒါကို ကျွန်တော်တို့ ၀င်ပါစရာ မလိုပါဘူး..... ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲမှာနေပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေး အောက်မှာ နေခဲ့တဲ့အချိုန်တွေမှာသူတို့က အမေရိကားမှာ ဇိန်နဲ့နေပြီး နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်လစာ ခံစားနေခဲ့တယ်... အန်တီစုလို...မင်းကိုနိုင်လို ဘယ်သူ အနစ်နာခံခဲ့လဲ... နှစ်ပေါင်းများစွာ... ဒီလို အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ လူတွေတောင် အမှန်ကို သိသွားကြပြီဘဲ..
သိန်းစိန်ကိုပါ ချကွာ ဘာမှမကြောက်နဲ့အားပေးနေတယ်
ဆရာရေ အားပေးပါတယ်။ သမိုင်းတရားခံတွေကို တရားမဆွဲခင် အခုလောလောလက်လက် ဖြစ်နေတဲ့ လယ်ယာသိမ်းခံထားရတဲ့ လယ်သမားတွေ လယ်ယာပြန်ရရေးကိုဘဲ ရအောင်တရားဆွဲပေးလိုက်ပါ။ခမာနီခေတ်က လူသိန်းချီသက်ခဲ့တဲ့ အမှုက ဒေါ်လာသိန်းချီကုန်တာတောင် အမှုမပေါ်သေးတာရော ဆရာအကူညီပေးဦးမှာလားးးး
Khin Oo said...
ဟဲ့. နင်ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ရင် တခြားနည်းသုံး ငါတို့ တိုင်းပြည်ကြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင် မနည်းလုပ်ထားရတာ
အညှောင့်မထောင်နဲ့ ၊ နောက်တစ်ကြိမ် တစ်ကပြန်စဘို့ အချိန်မရင်းနိုင်တော့ဘူး။
Aung Myo Tun said...
I agree with Watcher's comment.
Thank you Mr. Aung Myo Tun.
လောကကြီးမှာ ပြီးခဲ့တာတွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီး... ဆူဆူပူပူပြန် ဖြစ်အောင်
လုပ်ဖို့ မကောင်းပါဘူး... ဘယ်တုန်းကမှ ဒ်ါခင်ကြည်ကို ဘယ်သူ့မှ သတိ
မရခဲ့ပါဘူး ၁၉၄၇ ကတည်းကဒ်ါခင်ကြည်ကို မေ့ထားခဲ့တာ... နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်
၁၉၈၈ခုနှစ် ကြမှ သက်သက် အသုံးချသွားတာပါ.. ကျွန်တော်တို့
ဗိုလ်ချုပ်တစ်မိသားစုလုံးကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက အသုံးချနေတာ
ကြာနေပါပြီ.. တော်သင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်.. ပြီးခဲ့တာတွေကို ထားခဲ့ပြီး
ရှေ့လျှောက်ရမယ့် လမ်းကို ဂရုတစိုက် သွားဖို့ကို စဉ်းစားသင့်ပြီ...
အခုလည်း လာပြန်ပြီ... လူ့အခွင့်အရေးတဲ့... ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က
ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတာ.. ပြောင်းလဲမှုတွေ လဲလုပ်သင့်သလောက်လုပ်နေကြပြီ..
ဒါကို နောက်ကြောင်း ပြန်ဆွဲပြီး.. ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ အပါအ၀င် ဗိုလ်ချုပ်တွေကို
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်က ကိစ္စတွေအတွက် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့
အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ တရားစွဲခြင်နေကြပြီ... ဘ၀မှာ မှားခဲ့ကြတာကတော့
လူတိုင်း နီးပါးပါဘဲ... အမှားကင်းတဲ့လူဆိုတာရှားပါတယ်... အမှားကိုသိလို့
အမှန်ပြင်လိုက်ပြီဆို ခွင့်လွှတ်သင့်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်...
ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်အသက်.ကိုယ့်မိသားစုအသက်ကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင် ဘာမဆို
လုပ်မိမှာဘဲ...။ ခြေနေနဲ့ အချိန်အခါအရ ဒီလိုလုပ်မှ ဖြစ်မယ် ဆိုရင်လဲ လုပ်ခဲ့ရမှာဘဲ....
ဒါကို အပြစ်မဆိုသာပါဘူး... ဒါပေမယ့် အမှန်တရားကို တကယ်သိလို့
ကြည့်ပေးကြပါလို့... အဓိက က. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သား သမီး တွေရဲ့ အနာဂတ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် ကောင်းစားဖို့ဘဲ မဟုတ်လား.. သူတို့လေးတွေရဲ့ဘ၀ကို ကျွန်တော်တို့လို
မဖြတ်သန်းစေခြင်ဘူး...ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်ခဲ့...လုပ်ခဲ့.... ကဒါဖီလိုတော့ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး....ဆဒမ်ဟူစိန် လဲ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး.... ကျွန်တော်တို့က ဗုဒဘာသာဝင်တွေဘဲ မဟုတ်လား... ကံ ကံ ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်ကြပါ... မည်သူကမျှ..မည်သူ့ကိုမျှ လက်တုံ့ပြန်စရာ မလိုပါဘူး... ကံစီမံရာပေါ့.. ပျော့ညံ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး....
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြီကြီး ကောင်းဖို့ တစ်ခု အတွက်ပဲ...
ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေကို မကြုံဘူးတဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုတာ မရှိပါဘူး... ဒီလိုနဲ့
တဖြည်းဖြည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာ ခဲ့တာပါ.. အခုရေတွင်းတူး
အခုရေကြည်သောက်လို့ မရပါဘူး...အချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်... အမြဲတမ်းလည်း
မိုးမချုပ်သလို အမြဲတမ်းလည်း မိုးမလင်းပါဘူး...
ဒါကြောင့် အချိန်ကို စောင့်ဖို့လိုပါတယ်... Dr. ဦးမောင်မောင်လိုပြောရရင်
ဆန္ဒမစောကြပါနဲ့.....ဆန္ဒစောခဲ့ကြလို့ တိုင်ပြည်ကြီးလည်း ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီးပြီ..
အန်တီစုလည်း သဘောပေါက်သွားပါပြီ.. What she have to
do..... ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာ အချိုန်ယူရပါတယ်...
ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ အောင်မြင်နေပါပြီဆိုတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ တောင်မှ လွတ်လပ်ရေးမရခင်.. ပြည်တွငိးစစ်တွေနဲ့ မငြိမ်ချမ်းခင်တုံးက ဒါမျိုးတွေ အများကြီး ကြုံခဲ့ ရဘူးပါတယ်...
အဲ့ဒိ အချိန်အခါက တာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့ ပထမဦးဆုံး သမ္မတကြီးလည်း ဝေဖန်မှုတွေ.. အပစ်တင်မှုတွေ အများကြီး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်... သူ မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း မလွှဲ မရှောင်သာ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်..
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုပါတယ်.. ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မယ့်
တိုင်းတပါးနေ(နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်ရနေသူများ) အတွက်ကတော့အခြေအနေ
သိပ်မကောင်းတော့ပါဘူး.. ဒါ့အတွက်ကြောင့်ဘဲ ဒီလိုတွေ အော်နေကြတာပါ.. ဒါကို
ကျွန်တော်တို့ ၀င်ပါစရာ မလိုပါဘူး..... ကျွန်တော်တို့
နေခဲ့တဲ့အချိုန်တွေမှာသူတို့က အမေရိကားမှာ ဇိန်နဲ့နေပြီး နိုင်ငံရေး
ခိုလှုံခွင့်လစာ ခံစားနေခဲ့တယ်... အန်တီစုလို...မင်းကိုနိုင်လို ဘယ်သူ
အနစ်နာခံခဲ့လဲ... နှစ်ပေါင်းများစွာ... ဒီလို အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ လူတွေတောင်
အမှန်ကို သိသွားကြပြီဘဲ.... ကိုယ်ဘာသာကိုယ် နိုင်ငံခြားမှာနေ
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး နဲ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရက တိုင်းတစ်ပါးရောက် (အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်) မြန်မာ နိုင်ငံသူ/နိုင်ငံသားများ အသိပညာရှင် အတက်ပညာရှင် များကိုလည်း ၀မ်းပန်းတသာ ဖိတ်ခေါ်လျှက်ရှိပါတယ်..
တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း တိုက်ခိုက် သတ်ဖျက်တာတွေက တော်သင့်ပါပြီ...
နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ခဲ့ပြီလေ...ကရင်လူမျိုးကောင်းစားရေး ဆိုပြီး တိုက်ပွဲဝင် မိုင်းထောင်ပေမယ့်လည်း အမှန်တကယ် သေကြေပျက်စီးနေကြတာက ကရင်လူမျိုးက အများစု ဖြစ်နေတာ.. သူတို့သိကြမှာပါ... ငြိမ်းချမ်းရေး ယူရတော့မယ့် အချိန်ရောက်ပါပြီ... နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံမှာ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဆိုတာ
တစ်ဖွဲ့ထဲ ရှိလို့ရတယ်... ၂ ဖွဲ့ရှိလို့ကိုမရဘူး... ဒါ့ကြောင့်
ဘယ်သူလက်နက်စွန့်ရမလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သိကြပါ... မြန်မာကို ကမ္ဘာနဲ့
ရင်ဘောင်တန်းချင်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရယူ ရပါမယ်.... ဒါမှ
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်လာနိုင်မှာ အမှန်ပါဘဲ...
i don't like Zaw's comments.If he want2b popular he will try other ways he mightbat risk when he deal with them at the trial.He isnot doing for himself.He is trying to explore the truth n do for the ones who fought for the true democracy.pls care on ur words
တ၇ားစွဲတာ-မဆွဲတာတွေ အသာဘေးချိတ်ထားလိုက်ပါအုံးဗျာ။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ personality က ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအဓိကမျိုးနွယ်စုကြီး(၈)ခုနဲ့ လူမျိုး ၁၃၈ မျိုးထဲက တစ်ခုတစ်လေနဲ့နည်းနည်းလေး တောင်မဆင်ဘဲ။ ကုလားဒိန် ရုပ်ထွက်နေပါတယ်။ အဲ့သလို မြန်မာနဲ့နဲ့ လားလားမျှမဆင်တဲ့ personality နဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်စုံတစ်ယောက် ကိုတရားစွဲဖို့မဆိုထားလင့်၊ မြန်မာအရူးမထမီစွန်တောင်ကို တောင်စွဲဖို့ မသင့်ပါဘူး။ သားရေပေါ်အိပ်သားရေနားစားတဲ့ alien တစ်ယောက်ရဲ့ mindset မျိုးဘဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဦးသန်းရွှေမပြောပါနဲ့..ဟာသမယ်မသန်းရွှေကိုတောင်ဒီကောင်စော်ကားခွင့်မရှိပါဘူးထင်ပါတယ်။ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောပါတယ်။
Maung Thwe Thit said...
မင်းလို လူမျိုး ဟာ ဒီ လို web site ပါ ဝင် ပတ်သက် ခွင့် မရှဘူး
ကိုယ့် အဆင့် ကို သိပါ
ဆရာ လွဏ်း ဆွေ
ဒီလ်ု ခပါ ညံ့ညံ့ ပေါ ကြောင် ကောင် တွေရဲ့ comment တွေ ကိုလက် မခံ ပါ နဲ့
ဆရာ ရဲ့ သိက်ခါ က်ု တိခိုက်မှာဖစိုးရိမ်လို့ပါ
Tun Hla Maung said...
ဒီလူ တိုင်းပြည်ကို ဂျောက်ထဲတွန်းနေတာ ငတုံးငအ
နလဗိန်းတုန်းတွေက အမြင်တိုတို ဖေါ်လျှော်ဝင်လုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်
စောက်ရူးဖြစ်မှန်း မသိကြဘူး မရှိတာထက် မသိတာက
သန်းရွှေ ခင်ညွှန့် စသဖြင့် အယုတ်တမာ
လူသတ်ကောင်တွေကို ငရဲမကျမီ လူ့ပြည်မှာ ခုံရုံးတင်
တရားဆွဲ ဖို့ ဆိုတာကတော့ တော်တော် မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာ
ပါ။ ဒီ အယုတ်တမာများဟာ သူတို့ ကိုမပြောနဲ့ သူတို့ ဆွေ
စဉ်မျိုးဆက်တွေကို မတို့ထိနိုင်အောင် အကွက်အမျိုးမျိုး
ချပြီးသားဗျ။ ဒီကောင်တွေက သူတို့ စရိတ်နဲ့ သူတို့ သွားပါ
လိမ့်မယ် တရားစွဲတာတွေ ဘာတွေလုပ်မနေနဲ့ အချိန်ကုန်
တယ် ...ဒီကောင်တွေရဲ့ အကုသိုလ် ကံအကျိုးကြောင့်
အသေဆိုးနဲ့ တဆွေတမျိုးလုံးတုံးလို့ ခွေဖြစ်မှာ မလွဲပဲ။
အမှန်အကန်ကိုဖြစ်လာမှာပါဗျာ စောင့်သာကြည့် သိပ်မ
လောကျနဲ့။ အပေါ်က ဒီအယုတ်တမာ စစ်ခွေးတွေကို
တရားစွဲဖို့ ပြောလို့ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီး ဝေဖန်တဲ့ ကော်မန်း
တွေ ဆဲတဲ့ ကော်မန်းတွေ မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင်
စစ်တပ်အောက်ဆွဲ စောက်ကျင့် အဲမတန်မကောင်းသော
ဆဒမ်ဟူစိန်တို့ ကဒါဖီတို့ သေတဲ့ ပုံကို မြင်ဖူးကျမယ်လို့
ထင်ပါတယ်။ အတော့ကို တရားရစရာပါ ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အသေဆိုးမျိုးနဲ့ လူကြားမှာ ခွေးသေ၀က်သေ သေရတယ်ဗျ။ ဒီအာဏာရှင်တွေဟာ သာမန်အာဏာရှင်တွေမဟုတ်ဘူးနော် ရုရှားတို့ တရုပ်တို့စီက လက်နက်ကောင်းတွေကိုင်ထားပြီး အမေရိကန်ကိုတောင် အန်တု နိုင်တဲ့ စစ်တပ်တွေနဲ့ ပြည်သူကို ရာစုနှစ်များစွာ အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ အာဏာရှင်တွေနော်။ မြန်မာ့တပ်မတော်လို ဦးတေဇ ၀ယ်ပေးထားတဲ့ မီးကျိုးမောင်းပျက် သေနတ် အစုတ်ပလုပ်တွေ ဟော်ဝှစ်ဇာ ၂ လက် သုံးလက် နဲ့ တိုက်လေယဉ် ရဟတ်ယဉ် ပေါချောင်ကောင်း လက်နက်တွေ တက်စင်ထားတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူကို ချိမ်းခြောက်
အုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။ ကဲ အခုဘာဖြစ်သွားလဲ တယောက်က ကြိုးဆွဲချလို့ သူသက်လုံး အနိုင်ကျင့် ခဲ့တဲ့ လူတွေရဲ့ ရှေ့မှာ အရှက်တရားကင်းမဲ့စွာနဲ့ တွဲလောက်ကြီးသေပွဲဝင်ရတယ် ကဒါဖီဆိုရင် ဘာမဟုတ်တဲ့ အပေအတေ သာမန်ပြည်သူတယောက်က ဖိနပ်ချွတ်ပြီး ပါးဝင်ရိုင်တာတောင် ခံရလို့ အရှက်တကွဲဖြစ်လို့ သေပွဲဝင်ရတယ်။ အဲဒါ အာဏာရှင်တွေနော် လူသတ်ကောင်အာဏာရှုင်တွေ
ပြည်သူရဲ့ သီးခံနိုင်မှုအတိုင်းအတာ ကုန်လွန်သွားလို့
ဒေါသမီးတွေ တောက်လောင်လာချိန်မှာတော့ အာဏာရှင်တွေပစ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံဟာ မြေကြီးခဲလေးနဲ့ ကောက်ပေါက်လိုက်သလောက်တောင် အစွမ်းမရှိတော့တာ လူတိုင်းအတွေ့ပဲ။ အခုဗမာပြည်က အာဏာရှင်တွေ ဒီအတိုင်းတာဆက်သွား မကြာဘူး ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဒီအာဏာရှုင်တွေ ဘယ်လိုမှ အံတုနိုင်မယ်မထင်နဲ့ဗျို့။
Aung Kyaw Moe said...
ဖဲရိုက်ရင် တစ်ဆုံး ရှုံးမည့် ကောင်တွေ ပေါတောတော
ဇတ်လမ်းထဲ ၀င်အာချောင် နိုင်ငံရေး ပရိယယ် နားမလည်
တစ်ရှုံးမှာတွေ နိုင်မှာတွေနဲ့ ဖဲသမားစကားလာပြောနေရ
အောင် ကိုလွဏ်းဆွေဘလော့်က ဖဲဝိုင်းထောင်ထားတာ
လာ? အဲစကားတွေ ဖဲဝိုင်းသွားပြောကွာ ဒီမှာ ခွေးတွေကို
hey, watcher, you named yourself watcher. you just watch your ass. you do not watch others have been fucked by your motherfucker government. they do fucking murder, they do fucking rape, they do fucking destroying families lives till the families move to USA. do you think the families want to move to USA. I will say no fucking move. shit. Because of your fatherfucker government, they have to leave their lovely homeland, their families,and their relatives. your father fuckers do not see your ass, if so your ass will be broken into pieces.
Watcher ရဲ့comment ကိုထောက်ခံပါတယ်။မျှတပြီးဆင်ဆင်ခြင်ခြင်ရှိလို့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Dr လွဏ်းဆွေ ဆိုဒ်ထဲလာလာဟောင်နေတဲ့ watcher တို့ မောင်ပြောချင်တို့ ဆိုတဲ့ အကောင်တွေ မင်းတို့ လေသံတွေက စစ်ခွေးတွေ အူတဲ့အသံလို တဖြည်းဖြည်းကျက်သရေယုတ်စွာထွက်လာပြီ သတိထားပြီးလဲ ဝေဖန်လေကန်ကျပါဦး ဆရာသမားတို့
Zau Bung said...
ကျောင်းသားအရေးအခင်း... ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အရေးအခင်း... ဒီပဲရင်းအရေးအခင်း...တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ကြူးလွန်တဲ့ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေကို နိုင်ငံတကာ စစ်ခုံရုံးတင်နိုင်အောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။
စစ်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီး စစ်မတိုက်ပဲ အင်တာနက်ဆိုဒ်တွေမှာ လိုက်ပြီး ကွန်မန်းရေးဝါဒဖြန့်နေတဲ့ သန်းရွှေ လုပ်စီး စစ်ခွေးဝါဒဖြန့်ချီရေးသမားတွေ ကို့ဟာကို ကွန်မန်းရေးပြီး ကို့ဟာကို ထောက်ခံနေလိုက်ကျတာ ကောင်းပါ့ ကောင်းပါ့
ဘာတဲ့ အပေါ်က watcher ဆိုတဲ့ လူက မျှမျှတတတွေ ရေးပြထားတယ်တဲ့ ...ကောင်းကွာ တော်တော် မိုက်ရိုင်းပြီး ကို့လူမျိုး ကို့ပြည်သူအပေါ် အနဲငယ်မျှမချစ်တတ် ကိုချင်းမစားနာတတ်တဲ့ အယုတ်တမာ စစ်ခွေးဂလေဂချေတွေပဲကွ။
Ko Aung Htun...i am happy this..but becareful, dont trust now dress changed goverment.
we wanna see what they are going to be..they ate full enough..they deserve it. right...all agree it..just except their relative. tq Ko aung htun....
သူများတွေကို ဆဲရတာ လွယ်ပါတယ်.... ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အမှန်..အမှားကို ခွဲခြားတက်ဖို့က အရမ်းခက်ပါတယ်.... ဝေဖန်တာကို လက်ခံနိုင်ပါတယ် အလကား ထိုင်ဆဲနေတာ တော့ မကောင်းပါဘူး....
တရားစွဲဖို့ ပြင်နေတုန်းမှာပဲ အချိန်တန်ရင် သေမင်းက သူတို့ကို အလိုလို ခေါ်သွားမှာပါ... အချိန်ကုန်ခံပြီး ဘာလို့ လုပ်နေမှာလဲ အကျိုးရှိမယ့် ကိုယ့် နိုင်ငံ ကောင်းစားရေးကိုရှေ့ဆက်လုပ်ကြရမှာပါ...
အဲ့ဒိ ကိုအောင်ထွန်းဆိုတာ ဘယ်သူလဲ.. ဘာလူမျိုးလဲ သိတူသူရှိ၇င် ပြောပြကြပါအုံး....
အရေးအသားလေးတွေကိုကြိုက်လို့ သူများရဲ့ Bolg လေးကို ပြန် ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်...
အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ အတိုက်အခံတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအစီစဉ်တခုပါ
၂၀၁၅ မတိုင်မှီ တပ်မတော်မှအာဏာပြန်ယူပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့သာရှိတော့ပါတယ်
ပြည်သူ၊ ဘုန်းကြီး၊ ကျောင်းသား တွေရဲ့အထက်မှာ
ကို အောင် ထွန်း ဘာ လူမျိုးလဲ ဆိုတာသိဘို့ထက် အမှန်တရား အတွက် ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ရဲသူ တယောက် အဖြစ် ရိုးရိုးလေးလက်ခံလိုက်ပါ
MASTER RASE ဆိုတာလွန်ခဲ့ ပါပြီ
ရှေ့ဆက်ရမဲ့ ခရီး မှာ ကျနော်တို့ အားလုံးတသွေးတည်းတသားတည်းရှိဘို့ဘဲလိုအပ်ပါတယ်
၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေမှာပါပြီးသားပါ ဘာမှမသိသေးတဲ့ သူတွေ ထင်ရောင်
ကိုယ်နိုင်ငံ ကိုကျွန်ပြုတဲ့ သူတွေ ကိုတောင် သဘောထားကြီးသေးတာ
watcher ရေ မင်းကအများစုအပြောစစ်ခွေးလား။
ငါကတော့စစ်ခွေးမဟုတ်သလို nld အတိုက်အခံတွေရဲ့ နွားလည်းမဟုတ်ဘူး။
ရင်လွယ်ပါတယ်။ လုပ်နိုင်စွမ်း နဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကို ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင် တာကိုပြောချင်တဲ့ငါဟာ စောလူမင်းတွေရဲ့အမြင်မှာဖောက်ပြန်ရေးသမားပါပဲ။ အမှန်တရားကိုတခါတလေ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်စားရတတ်တယ်။ပိုင်ပြီထင်ပြီး အားရဝမ်းသာနဲ့ ပိတ်ဖမ်းလိုက်တဲ့ အမှန်တရားဟာ ကိုယ့်လက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါဘာမှသုံးစား
ဟုတ်ကဲ့ ငါ ဟာ စစ်ခွေးလည်းမဟုတ်ပါ၊အတိုက်အခံတွေရဲ့ နွားလည်းမဟုတ်ပါ။
မောင် Maung Thwe Thit ရေ မင်းရဲ့သမီးကို ချစ်တီးက သိမ်းသွားမှ ထ နာမနေနဲ့ ညီလေး.... လူမျိုးဆိုတာ ရေးကြီးပါတယ်..ကိုယ့်လူမျိုးကို သူများ စော်ကာူရင် လုံးဝ လက်မခံပါဘူး....
မောင်ပြောချင်.... ငါဟာစစ်ခွေးမဟုတ်သလို မင်းလိုလဲ NLD နွားလဲ မဟုတ်ပါဘူး.... အားလုံးက ငါ့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အမြင် သေးသေးလေးပါဘဲ.. ဒီနိုင်ငံမှာနေရင် ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေကိုတော့ လိုက်နာရမှာပေါ့.. လုပ်ချင်တာရှိရင် ဥပဒေအတွင်းကဘဲ လုပ်ရမယ်လေ... ဒါကြောင့်ဘဲ စစ်ခွေး ဖြစ်မသွားပါဘူး....
ငါဟာ စစ်ဆိုရင် ရေတောင်စစ် မသောက်ဘူး....
မောင်ပြောချင်ရေ..... "ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ရန် KIA မျှော်လင့်" ဆိုတဲ့လင့်လေးမှာလည်း သွားဖတ်ကြည့်ပြီး ကော်မန့်လေးပေးပါအုံး...
မောင်ပြောချင်.....စဉ်းစားရ ခက်နေပြီ ထင်တယ်....
ငါကNGUp.ရဲ့ comment ကို reply လုပ်ထားတာ ။အဲဒီမှာမင်းနဲ့ငါ့ကိုစစ်ခွေးလို့ပြောထားလို့ ငါဟာစစ်ခွေးမဟုတ်သလို nld အတိုက်အခံတွေရဲ့နွားလည်းမဟုတ်တဲ့ အ ကြောင်းပြန်ရှင်းထားပြီး မင်းကိုပါ NGUp တို့ထင်သလိုစစ်ခွေးလားလို့ မေးထားတာ။မင်း ငါ့ comment ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရင်နားလည်လိမ့် မယ်။
same to you mg pyaw chin
မင်းနဲ့ ငါနဲ့တော့ သိပ်မပြောပါနဲကွာ... ခင်းဗျုားနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ဆို တော်ရောပေါ့...မောင်ပြောချင်ရေ...
D MO said...
Wai Phyo bastard. Do n't you know Gautamma Buddha was an Indian as you call ka-lar?
Wathcer can be their PR. All of you should be aware that he can create long story. He is paid by Military Dictator and crony just to comment.
be careful. you must not trust "watcher". He is Than Shwe's man.
ကျနော့်ရဲ့ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း အောင်ထွန်းကို ယုံကြည်ပါတယ်။ သူဟာအလယ်တန်း၊ အထက်တန်း ကျောင်းသားဘဝအရွယ်ကတဲက တခုခုကို လုပ်မယ်ဆိုရင် မဆုတ်မနစ်လုပ်တတ်သူပါ။ သူကြိုးစားပေမဲ့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်မလာခဲ့ရင်တော့ နားလည်ပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ် ...
Way Phyo ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ Watcher ဆိုတဲ့ကောင်... မင်းတို့ပြောချင်ရင် သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်ကိုပဲပြောကြပါ။ လူတယောက်ရဲ့ personality ကို ထိခိုက်မစော်ကားချင်ပါနဲ့။ အောင်ထွန်းဟာ ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူ့ဟာသူဗမာစစ်မစစ်၊ သူ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်က အရေးကြီးပါတယ်။ မင်းတို့ပြောသလိုဆို မြန်မာစစ်မှ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ဝင်ပါရမှာလား။ ငယ်သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ငါက သူ့ရဲ့စိတ်ဓါတ်ကို အသိဆုံး။ မင်းတို့သိအောင်ပြောပြရရင် သူဟာပညာရေးမှာ အင်မတန်ထူးချွန်သူဖြစ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာလဲ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်မှာ ရှေ့နေဖြစ်ခဲ့တယ်။
စာရေးဆရာနေဝင်းမြင့် နဲ့အောင်ထွန်းနဲ့ဘာတော်သေးလဲ။ရုပ်က ဆင်တယ်။
Mind set ကိုခ်ျန်းလိုက်တော့
ြေ့ပတီဦးဆိုတဲ့ကောင် မင်းကို ငါဘယ်နခြါေ့ပာရမလဲ မင်းစောက်ရှက်နဲနဲမှ မရှိဘူးလာ။ မင်းအားနေရင် ဒီလိုပဲ လူတကာလိုက်ပြီး ဆဲနေကျလား ။ တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ ဂလေဂချေ ခွေးလိုကောင် ဒီဆိုဒ်က မင်းနဲ့ဘာပတ်သက်လို့ ၀င်လာပြီး အာချောင်နေရတာလဲ ။ မင်းအဖေ ချက်ကြီးဆိုဒ်ထဲမှာပဲ သွားရမ်းကားနေလိုက်ပါကွာ ဒီနေရာက မင်းလို အောက်တန်းစားနဲ့ မတန်ဘူး။ စောက်ဆင့်မရှိရင် ဘာမှဝင်မပြောနဲ့ မင်းပါစပ်ကို မင်းဟာမင်းပိတ်မလား ဒါမှမဟုတ်ငါ့ဟာနဲ့ ပိတ်ထားပေးရမလား ခွေးမျိုးပြေတီဦး။
ဟ ပြေတီဦးဆိုတဲ့တယောက် မင်းက ငါ့ကိုဘလိုင်းကြီး
လာကိုက်နေပါလား ။ မင်းကို ငါဘာများပြောမိလို့လဲကွ
ဟမ်?? လုပ်စရာကိုင်စရာမရှိရင်လဲ ကို့ဟာကိုအေးစေးနေ
ကျပါကွာ ကိုနဲ့သိလဲမသိ ဘာမှလဲမပတ်သက်တဲ့လူတ
ဒါနဲ့ တခုပြောရမယ် ဒီနေရာမှာ ဖဲဝိုင်းမရှိတာတော့သေချာ
တယ်ဟေ့ စော့ချင်ရင်တော့ ဖဲဝိုင်းရှိတဲ့နေရာတာ လစ်ကျ
မောင်ပြောချင် ၊watcher၊ khin 00 ၊ Aung Myo Htun ၊wai phyo ၊ Aung Myo Kyaw ၊ Ko Minn ဟ စစ်တပ်ကကောင်တွေလား ကြံ့ဖွတ်က ကောင်တွေလားဗျ အတော်များဘဲနော်။ တယောက်ထဲကဘဲ acc တွေပြောင်းပြီးရေးတာလား တယောက်စီကဘဲ ရိုက်နေတာလားတော့မသိဘူး လူ တော်တော်များတာဘဲ သန်းရွှေကြီးကိုထိလို့ တရားဆွဲမယ်ဆိုလို့ မခံချိမခံသာ ဖြစ်နေကျ ပါလားမောင်မင်းကြီးသားတို့ရေ။ ဟားဟား ရယ်ရတယ် သိပ်လဲ မခံနိုင်ဖြစ်မနေကျနဲ့ဦး ခင်များတို့ အဘကြီးကို လူမပြောနဲ့ နတ်တောင် တရားဆွဲပြီးအပြစ်ပေးလို့မရပါဘူးဗျာ။ စိတ်အေးလက်အေးနေကျပါ သိပ်မကြောက်ကျပါနဲ့ ။
သန်းရွှေတို့အဖွဲ့ကိုတရားစွဲမှာစိုးရိမ်လို့ကြောက်လို့စိတိပူလို့မဟုတ်ဘူးကွ။သူများHERO ထလုပ်တာကို(အကျိုးတကယ်ရှိ မရှိ၊ရေလိုက်လွဲပြီးတကယ်လုပ်ရမယ့်ဟာတွေကို မျက်ချေ
ပြတ်သွားပြီး အချိန်ကုန်ငွေကုန် လူပန်းနဲ့အကျိးမရှိမှာစိုးလို့။ဒါတွေက တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်တကယ်လုပ်သွားရင်းနဲ့ကျွဲကူးရေပါရှင်းသွားလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေပါ။) ယောင်ကန်းကန်းနဲ့ထပြီးလက်ခုပ်မတီးနိုင်တာကိုစစ်တပ်ကလို့သတ်မှတ်ချင်သတ်မှတ်၊ကြံ့ဖွံ့လို့ဆိုချင်ဆို။အမြင်ကျဉ်းသူတွေကိုတော့ရှင်းပြနိင်မှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာဘာအစွဲမှမရှိဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ပါတီစွဲ ကင်းမှအမြင်မှန်နိုင်မှာပါ။လုပ်ဆောင်ချက် ရပ်တည်ချက် ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးအပြစ်ဝေဖန်တဲ့comment တွေက ငါတို့ဘက်မှာမရှိရင် စစ်တပ်ကလူပဲလို့ထင်တာကတော့ အဖြူမဟုတ်ရင် အမဲပဲဖြစ်ရမယ်လို့ ထင်တဲ့ အရောင် ၂မျိုးတည်းကိုသိတဲ့လူသာသာ သာဖြစ်နေပြီပေါ့။အိမ်မှာရောင်စုံ TV ဝယ်ကြည့်ကွာ။အဖြူအမဲTV ကိုဘက်ထရီနဲ့ကြည့်မနေနဲ့တော့။အတွေးအမြင်ကိုပါဒုက္ခပေးလာနေပြီ။
သြော်...ဆြရာကြီး ဦးညံဝင်းရယ်... ပြောမှပြော တက်ပလေရယ်....
အစိုးရကို အတိုက်အခံလုပ်..အစိုးရက ပြဌန်းထား တဲ့ ဥပဒေတွေကို ဆန့်ကျင်ရုံနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ရောလား???
ဆြရာကြီး ဦးညံဝင်းရယ်... လှိုင်သာယာက မြေကွက်တွေပေါ် ကျူးကျော်ပြီး တဲထိုး.. စည်ပင်က ဖယ်ခိုင်းတော့ ၀န်ထမ်းတွေကို လိုက်ရိုက်... သူတို့လိုလူတွေကို အစိုးရက ဖမ်းရင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စားရင်းဝင်သွား ရောလား... မသိလို့ပြောပြပါ....
ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံချင်းမရှိဘဲ.. လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြ..အော်ချင်တိုင်အော်နေတာ ကကော... ဘယ်လို ဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူမလဲ.... ဆြရာကြီးသာ သမ္မတရာထူး ခဏ ရထားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ သိချင်လို့ပါ....
အဲ့ဒိလိုဆိုရင် ဦးသန်းရွှေတို့ ဦးခင်ညွန့်တို့.... နဲ့ တို့ပေါင်းများစွာသောသူတွေကိုနောင်အစိုးရ လက်ထက် မှာနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားလို့ ပြောနေကြဦးမယ်နော်....
လာထား... ဘယ်ကောင် လာဆဲဦးမလဲ မသိဘူး... ဆောင့်နေလိုက်ဦးမယ်....
Ko Aung Htun, all the people support you to sue Than Shwe, Khin Nyunt and their fellow army generals. Go ahead.
When and how? We are behind you.
how can you behind him?????? If you are really support to him, don't be hide anymore.
Yes... I like that...
ပြေတီဦးက မင်းပထွေးလာ ကိုမင်းဆိုတဲ့ လဒ။
ဟေ့ကောင်ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို စရိုင်းတာလဲ မင်းသေချာကြည့်လေ။ဘယ်ကောင်က ဒီဆိုဒ်မှာ သူများကိုခွေးနဲ့နှိုင်းလို့ ခွေးစကားအရင်ပြောတာလဲ။ အေးပေါ့ကွာ ငါလဲ မင်းတို့လို အဆင့်အတန်းမျိုးတွေနဲ့ ပြောနေရမှတော့ ငါ့စကားတွေလဲ ခွေးစကားထွက်လို့ အောက်တန်းကျနေတာ မစမ်းဘူးပေါ့ ညီလေး ပြေတီဦးနဲ့ ကိုမင်းဆိုတဲ့ နှမပေးယောက်ဖတွေရာ။
ရှေ့ ကို သွားဖို့အတွက် နောက်ကို လဲ့အမိူက် သိမ်းနေမယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ရှေ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး လက် ရှိဘာတွေလုပ်ပေးမလဲဆိုတာ တချက်ကြည့်ရမယ် စာအုပ်ရောင်းကောင်းအောင်တော့ ရှောက် မ ပြေားနဲ့ ကိုယ်အောင် မျှင် ဘို့ အတွက် ပြည်သူကိုခု တုန်း မလုပ်နဲ့ ရိုးသားပါ
အဲဒါတော့ အမှန်ပဲ တရားဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ ဘယ်လိုလူတန်းစားမှ မရှိသင့်ဘူး ...ဟုတ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေဆိုးမိုးရေး အပေါ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိပါဘူုး ကျောင်းသားမရှိဘူး ။ ဘုန်းကြီးမရှိဘူး အရပ်သားမရှိဘူး ...ဘာဆိုဘာမှမရှိဘူး ခက်တာက စစ်သားတော့ ငုတ်တုတ်ကြီးရှိတယ်ဗျ ဟီဟီ။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မထိုက်တန်လို့ ဒီပြည်သူတွေကို "စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး ပြန်အုပ်ချုပ်တာပဲ ကောင်းပါတယ်" ဆိုတဲ့စကားက အတော့ကို မိုက်မဲ မိုက်ကန်းတဲ့ အတွေးအခေါ် အယူဝါဒကဆင်းသက်လာတဲ့ စကားမျိုးပဲဗျ။ နည်းလမ်းကျကျဖြေရှင်းမယ်မရှိဘူး ဒီထိုင်ခုံကို အတင်း အဓမ လုဖို့လောက်ပဲ စိတ်ကူးနေကျတာကိုးဗျ။
_ယခုလက်ရှိ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတိုင်း ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ စပြီးလမ်းလျှောက်တာနဲ့ ပြည်သူတွေကလဲ တက်ညီလက်ညီ စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုလိုက်နာတတ်ကျတယ်လို့ထင်လား။ မှားမယ်... အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးတွေကြောင့် ပြည်သူပြည်သားတွေစည်းကမ်းတွေပျက် လို့
အုပ်ချုပ်သူတွေ ယုတ်မာလို့ တိုင်းပြည်မွဲသေပြီး စုတ်ပျက်လာတာတွေကြောင့် ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ ကောင်းမွန် ပြည့်ဆုံတဲ့ စနစ်ကြီးကို အစားထိုးအသုံးပြုပြီး တိုင်းပြည်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ကုသ ပေးခဲ့ရတဲ့ စနစ်ပါ။ ဘယ်နိုင်ငံမှ ထိုက်တန်လို့ အသုံးပြုခွင့်ရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး အသုံးပြုရင်း လေ့ကျင့်သင်ကြားလို့ နောင်များကြာလာတဲ့အခါရောက်တော့ ကလေးကအစ ခွေးအဆုံး ဒီမိုကရေစီပါးဝ သွားကျတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ လူထု ၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ နိုင်ငံဆိုတာ လုံးဝမရှိဘူး။
ဒီမိုကရေစီ ခေတ်ဦးတခုမှာ ပြသနာတခုဖြစ်တိုင်း ပြည်သူကို ဒီမိုကရေစီနဲ့ မထိုက်တန်တဲ့ အောက်တန်းစားတွေ သေနတ်နဲ့ မိုးပြီး အုပ်ချုပ်မှပဲ တန်မယ်လို့ တွေးထင်သူများကတော့ စစ်တပ်ရဲ့ ဥဆွဲ ကောင်တွေ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုခေတ်မာ ဘညာလုပ်လုပ် တရားဥပဒေနဲ့ ဖြေရှင်းရတာတော့မှန်ပါတယ် အဲဒီတရားဥပဒေက ပြည်သူတွေ မဲပေးထောက်ခံ ပြီး အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ဥပဒေမှ မဟုတ်ပဲ အာဏာရှင်အလိုကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ စာအုပ် အစုတ်တအုပ်သက်သက်ပဲဟာ ဒါကြောင်း ဒီမတရားတဲ့ ဥပဒေ ကိုလိုက်နာပြီး မတရားခံနေကျရတော့မာလားဗျ။ ကြည့်လည်းလုပ်ကျပါ ။ ခံရတာ ပြည်သူနော် ရေပေါ်ဆီ လူတန်းစား အာဏာရှင်တွေမဟုတ်ဘူး။